Myanmar : Tapaka ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 10:27 GMT
(Marihana fa efa nivoaka tamin'ny volana Septambra 2007 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Avy amin'ilay bilaogera Birmana tsy te hitonona anarana ity lahatsoratra ity.
Manohana faobe an'ireo fihetsiketsehana ankehitriny ny bilaogera Myanmar ary feno sary sy vaovao momba izany fihetsiketsehana izany ny tontolon'ny bilaogy Myanmar. Noho izany antony izany, nanapa-kevitra handràra ny bilaogy politika, saika avy hatrany taorian'ny fandraràna ny sehatra bilaogy Blogger (blogspot) ny fitondrana miaramila, vokatr'izany, voaràra avokoa ireo bilaogy hafa ao Myanmar. Nisy ireo bilaogera sasany niezaka nanodina ny proxy ary nibilaogy tamin'ny fampiasana teknika fametrahana bilaogy antserasera amin'ny alalan'ny mailaka. Mba haharatsy ny toe-javatra, nakatona ny BaganNet, mpamatsy tolotra aterineto voalohany ao Myanmar noho ny antony voalaza fa “fanamboarana” ary tapaka avokoa na araha-maso ny ankamaroan'ireo tolotra fifandraisandavitra. Fehezina tanteraka ny fandehan'ny vaovao mivoaka ao amin'ny firenena ary na ny mpankafy sary aza tsy maintsy mitandrina satria manao fanadihadiana momba ny loharano sy ny fiavian'ny sary ny fitondrana miaramila.
Nihena ny isan'ny lahatsoratra amin'ny bilaogy nandritra ireo andro ireo: na izany aza, mahavelom-panantenana tanteraka ny mahita fa mbola misy ireo bilaogeran'ny fahalalahana afaka mifandray foana any ivelany ary manao izay vitany hanomezany vaovao ho an'izao tontolo izao mikasika ireo vaovao farany momba an'i Myanmar.
Anisan'izany i Niknayman izay mahafehy ny fampiasàna ny CBox (fametrahana fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy) mba hampitana vaovao momba an'i Myanmar. Olona an'arivony no mamaky ny http://niknayman.cbox.ws/ isaky ny 24ora isan'andro sy 7/7 ary anisan'ireo loharanom-baovao ho an'ny am-pielezana Birmana manerantany izany. Nivoatra haingana ny fampiasàna sy ny fahombiazan'ny Cbox ary nisy ireo nanangana endrika “klôna” amin'ny teny Anglisy (http://burmanews.cbox.ws/ ) ho an'ny iraisam-pirenena.
Ahitana ireto ny lahatsoratra androany [28 Septambra]
Nanambara ilay mpisera Ancient Ghost fa misy ny fahatapahan'ny herinaratra faobe ao Rangoon.
Mikatona ireo cybercafe. Notapahan'ny mpamatsy tolotra aterineto MPT sy Myanmar Teleport ny fidirana amin'ny aterineto ao Rangoon sy Mandalay nanomboka tamin'ny maraina. Miezaka manakana ireo lahatsary, sary sy vaovao amin'ny fombany mahery setra amin'ny fanivanana ny any ivelany ny fitondrana miaramila. Nahazo vaovao avy amin'ireo namako aho omaly alina fa nisy miaramila nisava solosaina tao amin'ny tranobe Traders sy Sakura. Nalaina tao amin'ny biraon'ireo tranobe tena avo ny ankamaroan'ireo sary nandritra ny hetsika tao afovoan-tanàna. Tapaka ihany koa ny fifandraisana amin'ny finday ka sarotra ny miantso an-tariby na dia amin'ny olona ao an-toerana aza. Tsy mandeha ihany koa ny tolotra Somaiso. Mitoka-monina tanteraka i Birmania ankehitriny!
Loharanom-baovao sarobidy ahitana ireo sary farany ihany koa ny bilaogin'i Dr. Lun Swe. Vao avy nampiditra ireo sary nandritra ny fotoam-bavaka nokarakarain'ireo vondrona ara-pivavahana sasany tao amin'ny sisintanin'i Thailandy-Myanmar izy
Bilaogera Yan Aung kosa manolo-kevitra hanatevin-daharana ny fanentanana amin'ny media. Ny tanjony dia ny hanafaka an'i Birmania ary ny tetikasany dia:
- Manampy ireo bilaogera Birmana haharitra na dia eo aza ny sivana amin'ny sehatra blogspot
- Mampiasa ny sehatra WordPress raha hibilaogy amin'ny ho avy
- Mampitandrina ny rehetra manoloana ny famoretana mihoso-drà ao Birmania amin'ny alalan'ny lahatsary amin'ny Youtube
- Mizara sary ho an'ireo haino aman-jery tahaka ny New York Times, Asahi Shinbun, Washington Post sns.
Miezaka ihany koa izy mba hanangona vola ho an'ireo mifahatra ary mangataka amin'ireo mpandika teny mba handika ireo lahatsoratra sy hametraka fifandraisana miaraka amin'ireo haino aman-jery iraisam-pirenena.
Refugees Within (Mpitsoa-ponenana ao anatiny) kosa mibilaogy momba ny fomba hanampiana ireo mpikomy ao Birmania..
Nanampy tamin'ny fametrahana rafitra fanomezana antserasera ny iray tamin'ireo namako mba hanangom-bola ilaina hanohanana ireo mpikomy ao Birmania. Efa misy ireo maratra ary tsy mahavita miatrika izany ireo tolotra ara-pitsaboana, ka atahorana. Nanome 30 dolara avy aty Thaïlandy aho ary matoky ireo olona mandray izany aho. Manaova tahaka izany ihany koa ianao azafady: http://madnomad.com/ysb/